Nagarik News - हतियार खोइ?
बिहीबार १६ माघ, २०७०
फिल्मकर्मीले हिरोइनलाई फिल्म प्रचारको मुख्य 'हतियार' मान्छन्। ब्लेड बेच्न पनि महिला चाहिने युगमा फिल्म बेच्नका लागि हिरोइनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरा स्वाभाविकै हो। तर, फिल्म 'प्रोड्युसर'लाई भने प्रचारकै समयमा हिरोइन नभएपछि सकस पर्यो।
दर्शकले पुरुष कलाकारभन्दा महिला कलाकारका कुरा राम्रोसँग सुन्ने र सञ्चारमाध्यममा पनि महिलाले राम्रो स्पेस पाउने हुनाले निर्माताले प्रचारमा हिरोइन अघि सार्छन्। तर, 'प्रोड्युसर'की हिरोइन श्वेता भने अन्तिम समयसम्म गुमनामजस्तै बसिदिइन्। मिडियामा राम्रो पहुँच भएका निर्माता र कलाकार भएका कारण फिल्मको चर्चा कम त भएन। तर, प्रचारको समयमा फिल्म युनिटका सदस्यले एउटा प्रश्नको सामना गर्नुपर्दाे रहेछ, 'प्रचारको हतियार हिरोइन खोइ?'
तिमी उता, म यता
भ्यालेनटाइन्स डेको रमाइलोले नछोएको कोही छैन होला। सबैलाई प्रणय दिवसले छोएको छ। माया गर्न कुनै दिन वा साइत चाहिँदैन भन्नेहरू पनि आजभोलि भ्यालेन्टाइन्स डेमा रमाउन थालेका छन्। सँगै बस्ने युवा...
अघिल्ला वर्षका तीजमा महिलाहरूले 'अचाक्ली' गरे। महिनादिनअघि पार्टी प्यालेस र होटलमा दर खाने कार्यक्रम गरे। दरमा दारु मिसाए। सारी र गरगहनाहरूको उधुम प्रदर्शन गरे। तीज मनाउन ऋण पनि काढे। तर,...
मिनिस्कर्टमा कर्के नजर
मिनिस्कर्ट, मोबाइल र मोटरसाइकल अर्थात् 'थ्री एम'। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले यी थ्री एमले विद्यार्थीलाई छाडा, अनुशासनहीन र विकृत बनाएको देख्यो र ल्यायो आचारसंहिता। मिनिस्कर्ट लगाउन नपाइने, मोटरसाइकल चढ्न नपाइने,...
तालीको भोको टोन ट्रिएङ्गल
टोन ट्रिएङ्गल।नामैले प्रस्ट छ– यो तीन सदस्यको सांगीतिक समूह हो। पर्कसनिस्ट पुनम सापकोटा, गिटारिस्ट विशालविक्रान्त अधिकारी र भोकलिस्ट तथा गिटारिस्ट राकेश महत यसमा आबद्ध छन्। ब्यान्ड डेढ वर्षअघि फर्म भएको...